Miyuu aabbaha ama waalidka labaad ee cunuggu ka faa'iideysan karaa isla xuquuqda iyo ilaalinta hooyada? Su'aashu waa mowduuc maadama biilka maalgelinta sooshal sekuuritiga ee sanadka 2021 qorsheynayo in lagu kordhiyo shan iyo labaatan maalmood, oo ay kujiraan todobo maalmood oo qasab ah, mudada aabanimada ama fasaxa daryeelka caruurta kuwaas oo lagu daro 3da maalmood ee dhalashada). In kasta oo ilaalinnada la bixiyay kahor dhalashada cunugga loogu talagalay haweenka uurka leh, kuwa la siiyo dhalashada kadib waxaa si isdaba joog ah loola wadaagayaa waalidka labaad, iyadoo loo marayo magaca mabda'a sinnaanta. Tani waxay si gaar ah u khuseysaa ilaalinta ka saarida.
Xeerka shaqadu wuxuu abaabulaa ilaalinta shaqada ee haweenka uurka leh iyo hooyooyinka da'da yar: cayrinta waa mamnuuc inta lagu jiro muddada fasaxa umusha; muddada uurka iyo tobanka toddobaad ee ku xiga ee ku soo noqoshada shaqaaluhu shirkadda, waxaa shardi ku ah dhaqan-xumo aad u daran ama suurtagal la'aan in la ilaaliyo qandaraaska sabab la xiriirta uurka iyo dhalmada (C . trav., farshaxanka L. 1225-4). Qaadiga Beesha wuxuu cadeeyay amarka asalka kuwan
Tallaabooyin u diyaargarow ah aabbaha shaqada looga eryo dhalashada cunuggiisa ka dib July 10th, 2021Tranquillus
READ 03| Sida loo sameeyo codsi mashruuc xirfadeed loo-shaqeeyahaaga?
horeFrance oo joogsatay, bis repetita
socdaWaxqabadka qayb ahaan: caddaynta iyo wax ka beddelka laga bilaabo Noofambar 1, 2020 iyo Janaayo 1, 2021